Sawirro: Al-Shabaab oo soo bandhigay gaadiid iyo hub 'ay ku qabsadeen' Camaara - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Al-Shabaab oo soo bandhigay gaadiid iyo hub ‘ay ku qabsadeen’ Camaara
Sawirro: Al-Shabaab oo soo bandhigay gaadiid iyo hub ‘ay ku qabsadeen’ Camaara
Camaara (Caasimada Online) – Xafiiska Warfaafinta ee Al-Shabaab ayaa soo bandhigay sawirrada weerarkii ay ku qaadeen saldhigga ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee deegaanka Camaara ee gobolka Mudug halkaas oo ay kooxda Al-Shabaab sheegatay inay ku dishay 35 askari.
Weerarka ay Al-Shabaab ku qaaday Camaara oo ku bilowday qarax xooggan ayaa dhacay aroornimadii hore ee shalay, waxaana kooxda Al-Shabaab u suurta gashay inay gacanta ku dhigaanmagaalada Camaara, inkasta oo saacado kadib dib looga qabsaday.
Al-Shabaab ayaa sheegatay inay dagaalkaas ku qabsatay illaa 18 gaari oo ay ku jiraan gaadiid casri ah oo ay wateen ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Galmudug Axmad Kaariye Qoorqoor, waxayna sidoo kale sheegtay inay qabsatay hub iyo saanad ciidan.
Sawirada ay soo bandhigeyn ayaa waxaa sidoo kale ku jiro meydad ay sheegeyn inay yihiin ciidamada Dowladda inkastoo aysan jirin illo madax-banaan oo xaqiijiyey.
Balse sawirada ay soo bandhigtay Al-Shabaab ayaa waxaa laga dhex arkayaa illaa 4 gaari kuwaas oo laga qaaday sawiro dhinacyo badan ah si loogu muujiyo inay yihiin gawaari tiro badan.
Ma cadda in Al-Shabaab ay weli haysato baaburtaas iyo in kale, maadaama magaalada dib looga saaray kadib markii jab ballaaran la gaarsiiyey.
Taliska ciidamada militariga Soomaaliya ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday Camaara lagu dilay illaa 90 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka.
“Maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay isku dayeen inay weeraraan tuulada Camaara waxayna la kulmeen qasaaro aad u badan. Galabta ayaa la qaaday duqeyn xagga cirka ah oo lala beegsaday al-Shabaab oo lagu dilay ugu yaraan 90 argagixiso ah,” ayaa lagu yiri qoraalka twitter-ka.
Halkaan hoose ka daawo sawirada ay soo bandhigtay Al-Shabaab